एकै दिन लोकमानको घरमा सर्वोच्चको दुई टोली « Pahilo News
एकै दिन लोकमानको घरमा सर्वोच्चको दुई टोली
प्रकाशित मिति :5October, 2016 1:47 pm
१९ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको घरमा सूचना टाँस्न गएको सर्वोच्च अदालतको टोलीलाई काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० का कर्मचारीहरुले असहयोग गरेपछि सूचना टाँस्न पुनः दोस्रो टोली गएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको एउटा टोली बुधबार आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्कीको नयाँ बानेश्वरस्थित घरमा सूचना टाँस्न जाँदा वडाध्यक्षको रोहवरमा टाँस्नुपर्ने थियो । तर, वडाध्यक्ष नभएको हुँदा अदालतको टोलीले वडाका कर्मचारीहरुको रोहवरमा मुचुल्का उठाउने प्रयत्न गरेको थियो । तर, वडामा कार्यरत कर्मचारीहरुले मुचुल्का उठाउन नमानेपछि पुनः अदालतको अर्को टोली कार्कीको घरमा गएको बुझिएको छ ।
सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्ति प्रकरणमा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेपछि कार्कीले म्याद बुझ्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए । यसअघि नै, सर्वोच्चले आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्कीको नियुक्ति प्रकरणमा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले गत भदौ ३१ गते फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय सुनाएको थियो । कार्कीलाई सर्वोच्चले नै एक पटक सफाइ दिइसकेकोमा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अबको निकास : अध्यादेश वा एकता ?
काठमाडौं, १५ फागुन । राजनीतिक रूपमा दुई समूहमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट
काठमाडौँ, १४ फागुन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले श्हरी क्षेत्रमा हुने मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित गतिविधिमाथि निगरानी र
मुस्ताङ , १४ फागुन । सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका मुस्ताङ जिल्ला इञ्चार्ज पदम पुन